Nkọwapụta Companylọ ọrụ - Tianjin Best Science & Technology Co., Ltd.
Tianjin Best Nweta Science & Technology Co., Ltd. (CHINA BGT) bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na azụmahịa nke na-arụ ma na-ebupụ ma na-ebupụ kemịkalụ teknụzụ dị elu. CHINA BGT e guzobere n'afọ 2000. Isi ngwaahịa ndị dị iche iche na-akọwapụta gị n'ụlọnga, ọzọ nucleating gị n'ụlọnga na nwekwara maka egweri plastic nke e exported ọtụtụ mba nke South East Asia, Middle East na Europe fọrọ nke nta ka afọ 20 na ezi na mụ ogo.
CHINA BGT nwere ike ịnye ọtụtụ ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, dị ka onye na-eme ka o doo anya, ihe na-eme ka ọkpụkpụ na-arịwanye elu na ụlọ ọrụ nucle-Crystal. Enwere ike iji ngwaahịa ndị a na PP, PE, PET, PBT, NYLON, PA, EVA, POM na TPU wdg. CHINA BGT nwekwara ike centralized ọkọnọ iche iche nwekwara maka nhazi egweri plastic ngwaahịa, dị ka isi Remover, ink Remover, ihennyapade Remover, Flavoring Ukwu wdg na-enyere ndị ọrụ ịzọpụta na-eri na-eme ka ndị ọzọ uru na mmepụta. CHINA BGT nwekwara ike centralized ọkọnọ iche iche nwekwara maka nhazi egweri plastic ngwaahịa, dị ka isi Remover, ink Remover, ihennyapade Remover, Flavoring Ukwu wdg na-enyere ndị ọrụ ịzọpụta na-eri na-eme ka ndị ọzọ uru na mmepụta.
Omume bụ nke mbụ na uru bara uru. Nke a bụ echiche anyị na-eduzi na azụmahịa.
Bụ teknụzụ dị elu, BGT ngwaahịa nwere njirimara nke doro anya dị elu, enweghị toxity, enweghị isi ma gafere "Nlekọta Nchedo Nri & Ọgwụ" na ule RoHS site na SGS. Ngwaahịa nwere ike tinye ha n'ọrụ na kọntaktị nri. China BGT a ga-etinye aka iji kwalite mmekọrịta chiri anya na ogologo oge na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na mba ofesi na ụlọ, na-adabere na mmepụta teknụzụ anyị. China BGT ga-enye ndị ahịa anyị ọ bụghị naanị ngwaahịa dị mma, kamakwa yana ogo kwụsiri ike, ịkwụwa aka ọtọ yana ọrụ ka mma. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na weebụsaịtị anyị: www.bgtcn.com na www.baghastula.cn ma ọ bụ naanị kpọtụrụ anyị site na igbe email dị ka edepụtara na weebụsaịtị.